Kitapo fanadiovana fiara
Sponjy fanasana fiara
Mitt fanadiovana sy poloney
Chamois tena izy sy synthetic
Ahoana ny fomba hisafidianana ilay lamba famaohana miaraka amina fampisehoana lafo?
Ny endrika ivelany: ny lamba famaohana tsara dia malefaka sy mamiratra amin'ny lokony, na lamba famaohana vita amin'ny lamba vita an-tsoratra na tsotra, raha mbola tsara tarehy ilay izy, dia tsy maintsy ho tena tsara tarehy izy io. Ny lamba famaohana tsara dia misy endrika mazava ary misoritra tsara ny fahitana azy. ...
Inona no fitaovana ilainao hanadiovana ny fiaranao？
1.Microfiber lamba famaohana: satria marefo ny fandaminana, tsy manimba ny fiara velively rehefa manadio ny fiara. Ny vokatra dia manana fahaizana mandray rano be, ny fahaizan'ny rano mandray 610 heny noho ny an'ny lamba famaohana mahazatra, dia 23 heny noho ny lamba famaohana deerskin. Ny lamba famaohana ao anaty fanasana fiara, tsy ho ...
Tombony sy fatiantoka amin'ny servieta microfiber
Ny safidin'ny fitaovana lamba famaohana dia tena zava-dehibe, ny lamba famaohana vita amin'ny volo dia tsy mandena volo, tsy manimba, manana firaisana ara-nofo tena tsara, noho izany dia tadiavin'ny mpanjifa eny an-tsena, ka amin'ny farany dia ny faran'izay mahery lamba famaohana tsara? Inona no atao ...
Araka ny fanamarihan'ny mpanjifa, ireo lamba famaohana 10 tsara indrindra tamin'ny 2021
Ny fotoana mangatsiaka aorian'ny fampihetseham-batana dia ampahany manan-danja amin'ny fanazaran-tena ara-batana-saingy hita fa ny fijanonana milay mandritra ny fiofanana dia manan-danja ihany koa. Ny siansa dia mampiseho fa ny fampihenana ny maripanan'ny vatana dia mety hanitatra ny fotoana anazaran-tena, amin'izay hanatsarana ny fahombiazan'ny fanatanjahan-tena. Atleta matihanina maro an ...
Inona avy ireo akora amin'ny lamba famaohana microfiber?
Ny lamba famaohana Superfine dia karazana fitaovana vita amin'ny lamba avo lenta sy avo lenta. Ny lamba famaohana Superfine dia vita amin'ny polyester sy brocade composite novokarin'ny polyester import sy partie brocade. Ny filamatra microfiber dia polyester avo lenta 8020 sy brocade composite fila ...
Ny lamba famaohana microfiber dia afaka 'miaina'
Ny lamba vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy dia manana halemem-panahy tsara, fisehoana tahaka ny diera, fahamainana tsara, volo vita amin'ny hoditra amin'ny paiso, fahamendrehana tsara ary fampisehoana mizarazara tsara. Ity karazana fitaovana ity dia be mpampiasa, ary azo ampiasaina amin'ny fitafiana, fanadiovana, fanosehana, hoditra vita amin'ny hoditra ary vokatra hafa ...
Karazan-tànana inona no mety amin'ny fanasana fiara?
Tsy sarotra ny manasa fiara, fa azonao atao ny manamora ny asa amin'ny alàlan'ny fividianana fonon-tànana fanadiovana avo lenta. Manampia savony kely, siny iray na roa ary rano kely, ary afaka manana fiara mamirapiratra sy madio ianao. Zahao ny safidinay vokatra hahitana fonon-tànana fanasana fiara tsara indrindra eny an-tsena. Chenille micr ...
Lamba famaohana microfiber fanamainana volo
Raha ny fahazarana aorian'ny fandroana no resahina, ny fanazarana mahazatra dia ny maka fotsiny ilay lamba famaohana akaiky indrindra ary hamela azy ho maina. Na izany aza dia mety hanakorontana ny volonao ny lamba famaohana nofidinao, indrindra raha tsy mahitsy ny kofehin'ny volo. Ny servieta mikrofiber dia matetika deraina hanafainganana ny fotoana maina an'ny volo, ary f ...
Inona no ampiasainao hanasana ny fiaranao?
Fantson-drano fanasana fiara: Misy fantsom-panasana rano manasa fiara manokana eny an-tsena, azo zaraina ho fantsona nilona sy mafy arakaraka ny akora samihafa, ary ampiarahana amin'ny faucets famafazana. Ny tompona fiara dia mila mampifandray ny fantson-drano fotsiny mba hahatratrarana ny tsiranoka fanondrahana rano avo lenta ...
Inona avy ireo dingana hanasana ny fiara?
Ny fanasana fiara dia tsy maintsy mandinika ireo dingana, raha tsy izany dia mora ny manapotika ny lokon'ny fiara ary misy fiantraikany amin'ny endrika ivelany. Hasaiko hamafy ianao hanasa ny fiaranao toy izao: 1. Esory aloha ny atin'ny fiara ao anaty fiara ary diovy. 2. Sasao tsara amin'ny rano ny tampon'ny fiara, ary sasao tsara ny ...
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny lamba famaohana landihazo sy lamba famaohana microfiber amin'ny fidiran'ny rano
Ny lamba famaohana landihazo sy ny lamba famaohana microfiber dia faritra roa samy hafa tanteraka amin'ny fandraisana rano. Ny landihazo mihitsy no tena mitroka, mandritra ny fanamboarana lamba famaohana dia ho voaloton-javatra misy menaka, amin'ny fiandohan'ny fampiasana lamba famaohana landihazo madio dia tsy handraoka rano, aorian'ny intelo na inefatra ...
Inona no atao hoe lamba famaohana microfiber?
Ny Microfiber koa dia karazan-akora vita amin'ny lamba avo lenta sy avo lenta. Noho ny savaivony keliny, ny fihenjana miondrika an'ny Microfiber dia kely dia kely, ary mahatsapa malefaka be ilay fibre. Izy io dia manana asa fanadiovana mahery vaika sy vokany tsy tantera-drano sy afaka miaina.
Hahatsapa ny fandrosoan'ny fiaraha-miombon'antoka ny lanjan'ireo tompon-tany, ny sandan'ny mpiasa ary ny sandan'ny mpanjifa.
Manampy:Shangde Plaza, No.8 Kangle Str, Shijiazhuang 050051, Sina
© Copyright - 2010-2022: Voatahiry ny Zo rehetra. soso-kevitra - Vokatra mafana - Sitemap
Kitapo fanasana fiara, Lamba fanasana fiara, Chamois hoditra amidy, Sasao amin'ny lamba famaohana Microfiber, Lamba fanadiovana fiara, 100% Chamois amin'ny volon'ondry tena izy,